Mpikaka daty 13 hanome ny tranokalanao hiova | Famoronana an-tserasera
Manana a mpaka daty voalamina tsara dia zava-dehibe mba tsy handany andro faharoa ny mpitsidika amin'ny fisafidianana daty nahaterahana na rehefa te-handray ny filan'ny vokatra novidiny tao amin'ny eCommerce anay izy. Noho io antony io dia mitondra mpifidy daty sy ora 13 izahay ao amin'ny React izay miavaka amin'ny famolavolana sy ny traikefan'ny mpampiasa.
1 React selector maromaro
2 Manehoa tandavan-tany
3 Daty misy ny valiny
4 Mpaka daty RC
5 Maneho ny kalandrie
6 Mpifidy daty React amin'ny finday
7 Kalandrie React tsy manam-petra
8 Daty maneho hevitra
9 React selector teratany
10 Mpifidy React tsotra
11 Fotoana fampidirana
12 Mifidy mpamory andro
13 Reaction DatepickerJS
React selector maromaro
Ity datepicker ao amin'ny React, ankoatr'izay manana endrika tsara, Izy io dia miavaka amin'ny famelana ny fisafidianana daty maromaro amin'ny kalandrie omeny antsika. Azonao atao ny mahita ny demo mba hahalalana amin'ny toerany ny fihetsiky ny mpifidy React ity. Eto dia manana ny toerany ianao Github.
Un mpitsangatsangana daty ao amin'ny React.js izay miavaka amin'ny fanamorana ny fampiasana azy sy ny fomba fanao mahazatra azy. Tsotra amin'ny fahitana azy, ity no fahombiazana lehibe indrindra hahatongavany ho mpisao daty sy ora ao amin'ny tranonkalanao.
Daty misy ny valiny
Ity mpamaky daty React ity dia manaraka ny lamina mitovy amin'ireo taloha hanova amin'ny iray hafa amin'ireo voalaza eto amin'ity lisitra ity. Ary koa ny kalandrie, azonao atao ny misafidy andro maromaro hampiasaina amin'ny sivana. Mpanafika daty React mahaliana iray hafa izay anananao.
Mpaka daty RC
Ianao dia manana ny fampisehoana ity daty mpaka datin'ny RC ity izay manohy mampiseho kalitao lehibe toy ny ambiny. Ny iray amin'ireo antsipiriany dia izany manolotra ny mety hisafidy ny fotoana, noho izany dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa amin'ity lafiny ity. Ny traikefan'ny mpampiasa lehibe dia interface tsara toy ny mpifantina daty sy ora ao amin'ny React.js. Eto ianao ny anao Githoba.
Maneho ny kalandrie
Eto izahay dia mamoaka tanteraka ny fotoana, hijanonana amin'ny mpaka daty ao amin'ny React.js. Mitovy amin'ny teo aloha mazava ny lohahevitra, saingy miavaka amin'ny fisehoana ho bara izay azo sokafana mba hisafidianana ny daty tadiavintsika. Eto ianao ny anao Githoba handeha any amin'ny kaody loharano fa tsy ny demo.
Mpifidy daty React amin'ny finday
Ity daty mpamidy daty natokana ho an'ny finday avy amin'ny React.js ity dia tsy mitovy amin'ny ambiny ho an'ny lanjany kely dia kely. Misongadina amin'ny famolavolana azy amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo singa samihafa amin'ny daty amin'ny alàlan'ny kodiarana nomerika. Ianao dia manana ny anao Githoba mba hahafahanao manakaiky kokoa ny kaody loharano ary hampihatra izany amin'ny tranokalanao.
Kalandrie React tsy manam-petra
Ity mpaka daty tsy manam-petra namboarina miaraka amin'ny React ity dia miavaka amin'ny lohahevitra, fanohanan'ny klavier, fisafidianana sakany sy ny toerana. Iray amin'ireo mpaka daty feno indrindra amin'ny lisitra iray manontolo. Eto ianao ny anao Githoba ho an'ny fampahalalana sisa taorinan'ny nankafizanao ny demo. Ao amin'ny tontonana dia hanana ny andiana safidy rehetra ianao hanandramana ny tsirairay avy ary amin'izay dia hahazo ny hevitra tsara kokoa momba ny fahafaha-manao azy ianao.
Daty maneho hevitra
Mpaka daty iray ao amin'ny React izay miavaka amin'ny havaozina ho an'ny finday ary izany dia aseho amin'ny fomba tena tsara. Manana koa ny anao Githoba mba hahafantaranao ny antsipiriany rehetra momba azy ary ento amin'ny tranokalanao izany. Manana safidy maro isan-karazany ianao mba hahafahanao manamboatra azy io amin'ny alàlan'ny demo ary hahafahanao mivoaka bebe kokoa amin'izany.
React selector teratany
Manoro hevitra anao izahay handalo avy amin'i Githuba raha te hahalala ny volavolan'ity mpaka daty ity ao amin'ny React. Azontsika atao ny manavaka azy satria ampiasao ny API DataPickerAndroid, TimePickerAndroid ary DatePicker iOS. Ka ho fantatrao tsara ny interface-nao raha efa zatra miatrika ny iray amin'ireo OS ho an'ny fitaovana finday ireo ianao. Lavorary amin'ny fampiharana azy amin'ny fampiharana ho an'ny iray amin'ireo rafitra fiasa roa voalaza toy ny Android sy iOS.
Mpifidy React tsotra
Mpaka daty iray tena tsotra ao amin'ny React.js ahafahanao mahita ohatra fampiasana marobe avy amin'ny tranokala demo. Izahay koa manana ny anao Githoba hahalala ny ambiny amin'ny antsipiriany momba ity voafantina tsotra ao amin'ny React ity. Ny mahaliana iray hafa dia tsy ny fahatsorany ihany, fa ho an'ny azy koa safidy fanamoriana isan-karazany hanomezana tranonkala iray tena kanto sy tsotra.
Mpanapaka daty iray hafa izay ampiana ny safidy hisafidy fotoana koa, ka tanteraka izany. Miasa amin'ny momentjs ary ny famolavolana dia avy amin'ilay tranonkala Dribbble ihany. Azo antoka fa ho tianao izy noho ny famolavolana sy ny hakantony omeny ny tranonkala apetraka aminy. Ity no Githubanao mba tsy hanadinoanao na inona na inona miaraka amin'ny ohatra tsara hafa momba ny atao hoe mpifidy daty sy ora.
Mifidy mpamory andro
Ity mpitsangatsangana daty ao amin'ny React ity dia miavaka amin'ny 9KB ao anaty gzipper, ankoatry ny maha-izy azy azo namboarina tsara, azo zahana, izay manohana ny ARIA ary tsy miankina amin'ny zavatra ivelany. Ny localizable dia midika fa afaka misafidy ny fiteny amin'ny kalandrie isika mba handikana azy amin'ny fitenintsika. Iray amin'ireo voafantina feno indrindra amin'ity lisitra React iray manontolo ity ary izay manasarotra antsika manapa-kevitra amin'ny iray.
Ianao dia manana ny demo tahaka ny ambiny ho fantatrao in situ ity mpifidy daty ity izay miavaka amin'ny bara fitaovana izay rehefa manindry dia manokatra ny kalandrie. Izy io dia manana mpisafidy hover ary mpifantina manana kalitao avo lenta amin'ny famolavolana. dia minimalist, ka azo ampidirina amin'ny karazana tranonkala. Manana ny Github-nao ianao hahalalanao ny ambiny amin'ny antsipiriany sy hampiasa ny kaody araka izay sitrakao amin'ny tranonkalanao.
Izahay dia mamela anao lisitra hafa, na dia eo aza ny fotoana fampiasa amin'ny CSS ka ny ampiharo manomboka izao ary manana repertoire tsara ianao hisafidianana izany endrika kanto izany amin'ny tranokalanao.